Iran: Bilaogera voasazy higadra
Mediam-bahoaka18 Febroary 2019
Nitatitra ireo tranonkalam-baovao Iraniana maromaro, tahaka ny Amir Kabir [fa], tranonkalan'ny mpianatra fa voasazy higadra 36 volana an-tranomaizina i Omid Reza MirSyafi, Iraniana bilaogera sady mpanao gazety. Voampanga ho nanevateva ireo mpitondra fivavahana Iraniana sy nanao fampielezan-kevitra manohitra ny Repoblika Islamika izy.
Lalàna16 Febroary 2019
Fahalalahàna miteny15 Febroary 2019
Mediam-bahoaka13 Febroary 2019
Manana fiarahamonina antserasera manan-danja eo amin'ny bilaogy mavitrika 60.000 i Iran ary olona hatramin'ny 20 tapitrisa no mifandray amin'ny aterineto. Satria mavitrika ny tontolon'ny aterineto Iraniana, dia toy izany koa ny fanivanana ataon'ny governemanta amin'ny votoaty azo idiran'ny olom-pirenena Iraniana.
Mediam-bahoaka07 Febroary 2019
Mediam-bahoaka05 Febroary 2019
(Marihina fa tamin'ny volana Janoary 2011 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Hrana , sampam-baovaon'ny mpikatroka mpandala ny zon'olombelona no mitatitra fa atahorana ny ain'i Hossein Maleki Ronaghi ary mila fitsaboana maika izy any am-ponja. Voasazy higadra 15 taona an-tranomaizina i Hossein Maleki Ronaghi. Iray amin'ireo mpikatroka an-tserasera lehibe ao ambadiky...